Gara Uri PaBasa Ravo
Mugovera, 11 Ndira 2020
"Vakanga vakatarisisa paakanga achienda, uye pakarepo varume vaviri vakanga vakapfeka nguo chena vakamira pavari. Vakati kwavari: Varume veGarirea, makamirireiko pano makatarisa kudenga? Iyeyu Jesu abviswa kwamuri achienda kudenga, achadzokazve sezvamamuona achienda kudenga" (Mabasa 1 ndima 10 kusvika 11).
Tenzi vari kudzoka. Zuva ravo rava pedo. Ndiko kusaka tichifanira kugara tiri pabasa ravo. Tsvaka kuti Humambo hwavo husvike kunzvimbo dzakawanda. Shuva kuti Humambo hwavo hutonge nyika ino. Shuva kuti hutonge moyo yevanhu. Tenzi vanofanira kukuwana uri pabasa ravo. Vane zvinhu zvavakakuraira. Vanoda kukuwana uchiita zvinhu izvi. Izvi ndizvo zvatinovona mumashoko avo. Tinoaverenga muna Johane 14 ndima 15. Vakati, "Kana muchindida, itai zvandakakurairai".
Tenzi vakatituma. Vanoda kuti tisvitse Vhangeri pasi rose. Vakatipavo simba rekuita basa iri. Vakatipa mvumo yekuriita. Saka ronga kuita basa iri. Ronga kuriita pakuru. Wedzera shungu dzako. Tsvaka kuti Vhangeri rizikanwe. Tsvaka kuti vamwe vagadzirire kuuya kwaTenzi. Asi kune vamwe vanoda kuziva kuti Tenzi vava pedo zvakadini. Vanoda kuziva kuti kwasara mazuva mashoma here. Kana kuti masvondo. Kana kuti mwedzi. Kana kuti makore. Vanoda kutanga vaziva izvi. Ndiko kuti vagotanga kugadzirira. Ndiko kuti vagozvichenesa. Nguva yasara haina basa. Chinongodiwa kugara uchiwadzana navo. Chinodiwa kushandisa Shoko ravo pakurarama kwako. Chinodiwa kurarama semunhu akaponeswa. Hauzovhunduki musi wavanouya.
Tiri kuzovona Tenzi. Zuva iri rinenge riri remufaro. Mufaro wacho uchange usingabviri. Bhaibheri rinotaura nezvekuuya kwavo. Tinoverenga mashoko aro muna 1 VaKorinte 15 ndima 52. Rinoti, "Pakarepo, sokubwaira kweziso, pahwamanda yokupedzisira. Nokuti hwamanda icharira, vakafa vachamutswa mukusaparara, uye tichashandurwa". Vanhu vachashamiswa musi uyu. Vachashaiwa kuti chii chinenge chaitika. Vamwe vachakoniwa kuzvibvuma. Vamwe ndivo vachange vachichema. Vanenge vasiiwa panyika. Asi tinotenda Mwari. Tose tichine mukana. Tine mukana wekuita zvinodiwa. Tine mukana wekugadzirira zuva iri. Richange riri zuva rinoshamisa. Saka ramba uchida Ishe. Vade nemoyo wako wose. Gara uchiunza vanhu kuna Mwari. Ramba uchifarira vanhu. Ramba uchivada. Hareruya!
Baba vakarurama. Muri Mwari vakuru sei. Muri Mwari vanoshamisa sei! Ndiri kutarisira kudzoka kwaKristu. Zuva iri richange richifadza zvikuru. Shungu dzangu dziri pakuita zvamunoda imi. Dziri pakubvisa vatadzi murima. Ndinoda kuvapinza muchiedza. Ndinoda kuvabvisa kuna Satani. Ndinoda kuvaunza kuna Mwari. Ndinoda kuti vave vagari veHumambo hwenyu. Humambo uhu huchagara huripo nekusingaperi. Mahuri ndimo mune hupenyu husingaperi. Muzita raJesu. Ameni.
Ruka 12 ndima 38 NLT
2 Timotio 4 ndima 7 kusvika 8
Kana muchishuva kuti vamwe vawanewo zvidzidzo izvi, makasungunuka kutuma mari neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakurop afadzei)